Fikarohana filaharan'ny laharam-pikarohana laharana 2013 | Martech Zone
Highbridge vao nosoniavina tamin'ny Searchmetrics ary izahay izao dia mampiroborobo ny suite ho mpiara-miasa aminy Martech Zone. Antony lehibe iray satria iray amin'ireo vitsy izy ireo SEO fitaovana izany dia mifantoka amin'ny fiatraikany amin'ny fiatraikany ara-tsosialy sy ny laharana toy ny anton-javatra SEO nentin-drazana.
Inona no itovizan'ny pejy web izay apetrak'i Google tsara, ary inona no mampiavaka azy ireo amin'ny pejy ambany? Searchmetrics dia nandinika URL 300,000 niseho tamin'ny toerana valin'ny fikarohana ambony indrindra momba ny fisian'ny sy ny haben'ny fananana sasany. Ny valiny dia aseho amin'ny fomba ifandraisan'ireto fananana (lafin-javatra) ireto amin'ny laharan'ny Google (fampiasana Ny coefficient mifandraika amin'ny laharana Spearman).
Ity tatitra ity dia sady feno no tsy mampiseho diso ny data (antony manohitra ny fifandraisana) toy ny ataon'ny orinasa matihanina fikarohana sy matihanina fikarohana. Ny vahaolana lehibe ho antsika dia ny fiantraikan'ny fomba fanao amin'ny fikarohana mahazatra miaraka amin'ny fizarana ara-tsosialy…. Oay!
GM: Diso ny fanadihadiana ataonao
Jul 12, 2013 amin'ny 5: 10 AM
Infographic tsara. Ny mari-pamantarana ara-tsosialy sy ny Google Authorships dia antony lehibe indrindra amin'ny fahazoana laharana tsara amin'ny SERP.